बेलायतमा २ लाख ३३ हजारभन्दा बढीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण – Khabar Silo
काठमाडौं – साढे ४ महिनादेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बेलायतमा ३३ हजार ६१४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म २ लाख ३३ हजार १५१ जना संक्रमित भएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ४२८ जनाको मृत्यु भएको छ भने अरु ३ हजार ४४६ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
१ लाख ९९ हजार १९३ जनाको उपचार भइरहेकोमा १ हजार ५५९ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
भाइरस हावामा फैलिरहेको सा’वधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले भाइरस, मानिस र वातावरणको त्रि’कोण संक्रमण हुन मुख्य भूमिका खेल्ने बताए। ‘हावामा को’रोना फैलिरहेको भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। हामी बस्ने कोठमा, झ्याल हावा खेल्ने हुनुपर्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘ हाम्रो व्यवहारबाट संक्रमण सर्ने हुन्छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गर्न नछोडौं।’ रो’गसँग ल’ड्ने […]
काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ ३ रातिदेखि भदौ १० गते रातिसम्म लकडाउन
काठमाडौँ- काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ ३ गते रातिदेखि भदौ १० गते रातिसम्म लकडाउन हुने भएको छ। तीनै जिल्लामा कोरोना रोकथाम समितिका बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा भदौ ३ गते रातिदेखि भदौ १० गतेसम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय मंगलबार राति गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले लकडाउन गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब […]
अ’कस्मात् भयो मुटु का’पने दु’र्घटना आमा र छोराको घ’टना,स्थलमै मृ त्यु ! अ’कस्मात् भयो मुटु का’पने दु’र्घटना आमा र छोराको घ’टना,स्थलमै मृ त्यु ! राजविराज / पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कल्याणपुरमा गए राति भएको दु’र्घ’टनामा परी दुई जनाको मृ’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेमा सप्तरीको खडक नगरपालिका–५ रंजितपुर निवासी ३० वर्षीय वीरेन्द्र दास र उनकी ५० […]